Ikemefuna ''Things fall Apart'' - Eastern Reporter
Ikemefuna ”Things fall Apart”
July 5, 2018 easternreporter	0 Comments Igbo
Ikemfuna bụ onye Mbaịnọ. Ndị Mbaịnọ ji ya na otu nwaagbọghọ kwụọ ụgwọ onye Ụmụọfịa ha gburu. Ụmụọfịa gosiri ugwu na nsọpụrụ ha nwere n’ebe Okonkwọ nọ wee kpọnye ya Ikemfuna ka ọ na-eleta ya anya ruo mgbe ha ga-eji ya mee ihe ha ga-eme.
Okonkwọ kpọọrọ Ikemfuna kpọnye nwunye ya nke mbụ bụ nne Nwoye ka ọ na-azụ ya. Ikemfuna bụ nwata maara ihe nke ukwuu. Okonkwọ chọpụtara na o nwekarịrị nwa ya bụ Nwoye uche na ezi agwa. Nke a mere ha ji weere ya dịka otu n’ime ndị ezinaụlọ Okonkwọ.
Ikemefuna bidoro kpọwa Okonkwọ nna ya. Mgbe ndị Ụmụọfịa kwadoro iji Ikemfuna chụọ aja, Ogbuefi Ezeụdụ dọrọ Okonkwọ aka na ntị ka ọ ghara itinye aka n’ọnwụ Ikemfuna n’ihi na nwata ahụ weere ya dịka nna ya.
Ma ụbọchị ndị Ụmụọfịa bịara kpọrọ Ikemfuna ka ha gbuo ya n’ajọ ọhịa, Okonkwọ, iji gosi na ya kara obi sooro ha gawa ịchụ aja ahụ. Mgbe onye a gwara ka o bepụ isi Ikemfuna gbuhiere ya mma, Ikemfuna tiri mkpu gbagawa ebe Okonkwọ nọ ka ọ zọpụta ya.
“Nna ha e gbuo m ooh!!! Okonkwọ egeghị ya ntị maọlị, were mma ya bepụ ya isi. Bido n’ụbọchị ahụ gawa, ihe bidoro jọwara Okonkwọ njọ n’eluụwa.
Okonkwọ nwere Obi mana obi ya jọrọ njọ nke ukwuu nke igbu nwata na-akpọ gị nna ya, na agbanyeghi aka Ogbuefi Ezeụdụ dọrọ ya na nti gbasara nkea!
← Herbalist dies while testing anti-bullet charms
Police Recover two human skulls in Cross River →